बक्सिङ्ग – Khel Dainik
मिनु र चन्द्रकला अंकका। आधारमा पराजित
एसियाडका लागि २० खेलाडीको प्रारम्भिक छनोट
गणेमान सिंह बक्सिङ मंगलबारदेखि
थाइल्याण्डमा पुनमलाई काँस्य
काठमाडौं (खेलदैनिक) । टर्किको ईस्तानबुलमा मई ९ तारिख देखि सञ्चालन भईरहेको आईवा उमन वल्र्ड बक्सिङ्ख च्याम्पियनशिपमा प्mलाई वैट ५० देखि ५२ किलो तौल समुहमा नेपाली खेलाडी मिनु गुरुङ्ख जापानका खेलाडी रिन्का किनोसितासंग अंकको आधारमा पराजित हुन पुगेकि छन् ।
काठमाडौं (खेलदैनिक) । चीनको हाङझावमा भदौ २५ देखि असोज ९ गतेसम्म हुने १९ औं एसियाली खेलकुदको एथलेटिक्सका लागि २० खेलाडीको प्रारम्भिक छनोट गरिएको छ ।
काठमाडौं (खेलदैनिक) । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको स्मृतिमा गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु हुने भएको छ ।
काठमाडौं (खेलदैनिक) । थाइल्याण्डको फुकेटमा संचालन भई रहेको थाइल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय खुला बक्सिङमा नेपाली महिला बक्सिङ्ग खेलाडी पुनम रावलले महिला ६० के.जी. तौल समूहमा काँस्य पदक जित्न सफल भएकी छन् ।
सुरज र किसन पहिलो
धनगढी (खेलदैनिक) । दाङका सुरज ओली र रोल्पाका किसन घर्तीमगर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छनोटमा पहिलो भएका छन् ।
सन्दीप र चिरञ्जीवी फाइनलमा
काठमाडौं (खेलदैनिक) । कञ्चनपुरका सन्दीप नाथ र बाजुराका चिरञ्जीवि खड्का गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय छनोटको फाइनलमा पुगेका छन् ।
थाइल्याण्डमा सुष्माको प्रतिस्पर्घात्मक हार
काठमाडौं (खेलदैनिक) । फुकेटमा सञ्चालन भईरहेको थाइल्याण्ड ओपन इन्टरनेशनल बक्सिङ च्याम्पियनसिपमामा नेपालकी सुस्मा तामाङ्गले ४८ के.जी. तौल समूहमा इटोलीकी रोबर्टा बोहाट्टीसंग ३–२ को स्पलीत डिसिजनमा पराजित भइन् ।
रोहित र मार्सल पहिलो
काठमाडौ (खेलदैनिक)ं । धादिङका रोहित महर्जन र काठमाडौंका मार्सल गुरुङ गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताअन्तर्गत बागमती प्रदेशस्तरीय छनोटमा पहिलो भएका छन् ।
नवलपुरका आकाश पहिलो
पोखरा (खेलदैनिक) । नवलपुरका आकाश राना गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशस्तरीय छनोटमा पहिलो भएका छन् ।
अक्सफोर्ड बन्यो क्रिमसन कप च्याम्पियन चैत्र २१, २०७८
प्रतिष्ठित इलिट वुमन रेफ्री प्यानलमा अन्जना चैत्र २१, २०७८
किरनको टोली माजियाको लगातार दोस्रो जित चैत्र २१, २०७८
रोहितको टोलीसँग रोनाल्डिन्होको टिम पराजित चैत्र २१, २०७८
एभनिरलाई हेमजा गोल्डकपको उपाधि चैत्र २१, २०७८
एन्फा उपाध्यक्ष केसीलाई गृहजिल्लामा भव्य स्वागत चैत्र २१, २०७८